१२ चलचित्रहरु जसमा कलाकारहरुले साँच्चै सेक्स गरेका थिए ! – Waikhari
गृहपृष्ठ विविध १२ चलचित्रहरु जसमा कलाकारहरुले साँच्चै सेक्स गरेका थिए !
१२ चलचित्रहरु जसमा कलाकारहरुले साँच्चै सेक्स गरेका थिए !
काठमाडाैं । हामीले हेर्ने धेरै मुलधारका चलचित्रमा देखाइने सेक्स सिन झुठा हुन्छन् । तर, विश्व चलचित्र क्षेत्रमा केही यस्ता चलचित्र पनि छन्, जुन चलचित्रमा कलाकारहरुले स्क्रीनकै लागि भनेर साँच्चै सेक्स गरेका छन् ।
यी १२ चलचित्रहरु जसमा कलाकारहरुले साँच्चै सेक्स गरेका थिएः जानी राखौ :-
१. ९ संगस् :
३.एनाटोमी अफ हेल :
४.इन द रेलम अफ सेन्सेस :
५.पोला एक्स :
७.लभ एक्चुअल्ली सक्स :
८.स्कार्लेट दिभा :
९.थ्रो द लुकिङ ग्लास :
१०.पिंक फ्लेमिंगोस् :
११.स्वीट मुभी :
१२. गाण्डु :